Bernard Minier ။ ဗိုလ်မှူး Martin Servaz အားဖြင့်သူ၏စီးရီး၏ပြန်လည်သုံးသပ် | လက်ရှိစာပေ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 29/04/2021 12:00 | စာရေးဆရာများ, ဝတ္ထုနက်
Bernard Minier, အတွက်အကြီးမားဆုံးအမည်များထဲကတစ်ခု ဝင်ရိုးစွန်း ပြင်သစ်, နောက်ဆုံးအကြောင်း 1. နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်သည်ဝတ္ထုအသစ်ဖြန့်ချိ အမဲလိုက် (အမဲလိုက်ခြင်း) နှင့်၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးသတ္တဝါ, တပ်မှူးသရုပ်ဆောင်သော6အရစ်ကျဖြစ်ပါတယ် Martin Servaz။ သို့သော် ... ၎င်းကို Gallic နိုင်ငံများတွင်ယခုထုတ်ဝေသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးနှောင်းပိုင်းနှင့်ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်သည် ချိုင့် (ချိုင့်ဝှမ်း) ။ ဒီထိုက်တန်ပါတယ် စီးရီး၏ပြန်လည်သုံးသပ် သင့်ရဲရဲရဲရဲရဲနိုးကြားမှုခေါ်ဆိုမှုနှင့်မကြာမီကျွန်ုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သောစာဖတ်သူများထံရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
2 Martin Servaz စီးရီး
Bernard Minier ကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင်Béziersတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးစာပေများကိုလုံးလုံးလျားလျားအသုံးမပြုမီအကောက်ခွန်ဌာနတွင်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ 1960 ခုနှစ်တွင်သူထုတ်ဝေခဲ့သည် ရေခဲအောက်မှာ, ကြယ်ပွင့်6ဝတ္ထု၏ပထမ ဦး ဆုံး Martin Servaz, သူ၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုထိပ်ထိပ်မှသူ့ကိုခေါ်သွားတယ် သည်းထိတ်ရင်ဖို ထူးချွန်စာရေးဆရာများထက်အနည်းငယ်ပိုရှိပါတယ်ဘယ်မှာပြင်သစ်စိတ်ပညာ။ အောက်ပါတို့ဖြစ်ကြသည် စက်ဝိုင်း၊ ညအလင်းရောင်မပိတ်ပါနဲ့ နှင့်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိရန်ကျန်ကြွင်းသောနှစ်ခု။ AND၏တစ်ခုတည်းသော Two- အချိန်ဆုရှင် s Polar Award Cognac ပွဲတော်နှင့်သူ၏အလုပ်ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ တွင်ဘာသာပြန်ထားပြီးနှစ်သန်းကျော်အုပ်ရေရောင်းခဲ့သည်။
သူ၏လူသိအများဆုံးဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် Martin Servaz, တပ်မှူး Toulouse ရဲ။ သူမရဲ့ဗီဇ, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်အဖြစ်တစ် ဦး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုကိုဖွင့် သူ၏ကြီးမားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အသီး, သူတို့ကသူ့ကိုသို့လှည့်ပါပြီ အများဆုံးနောက်တော်သို့လိုက်တစ်ခု အမျိုးအစား၏။
El စကွဝဠာ Servaz ဝန်းကျင်မှာသူတို့ပြည့်နေတယ် သမီး နှင့် ပစ္စည်းကရိယာ အပေါင်းအဘော်၏ ကောင်းမှုနှင့်အဆိုးဆုံးအတွက်သူနှင့်အတူပါသောသူ။ ပြီးတော့သူ့ ကျောက်တုံး, မဆုတ်မနစ်သူ့ကိုလိုက်ရှာသူတစ် ဦး မအောင်မြင်နိုင်တဲ့စိတ် ဒါပေမယ့်သူဟာကြောက်စိတ်တွေကိုကျော်လွှားပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။
စီးရီး Martin Servaz
ဒီဇင်ဘာလတွင်ပထမ ဦး ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည် 2008 နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လမ်းပေါ်တွင်, ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ဝန်ထမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိရှိရာ Pyrenees ၏နက်ရှိုင်းသောချိုင့်ဝှမ်း၏ရှုခင်းနှင့်အတူ တစ် ဦး headless မြင်း၏ခန္ဓာကိုယ်။ Servaz သည်တာဝန်ခံဖြစ်သည် သူ၏အလုပ်အကိုင်တစ်ခုလုံး၏အထူးဆန်းဆုံးအမှုဖြစ်ပုံရသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းကဒီဟာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ရှည်လျားပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိပ်မက်ဆိုးရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသထားတယ် ဂျူလီယန် Hirtmann.
ဒါဟာဖြစ်လာခဲ့သည် ရုပ်မြင်သံကြားလိုက်လျောညီထွေ ဘယ်မှာ ချားလ်စ် berling သူသည်အများပြည်သူနှင့်အထူးသဖြင့်စာပေတစ်ခုအကြားထင်မြင်ချက်များကိုခွဲခြားထားသည်။
ဤတွင် Servaz တစ် ဦး နှင့်အတူဆကျဆံ သေးငယ်တဲ့ကောလိပ်မြို့အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလူသတ်မှု အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး ကရဲကိုဖုန်းခေါ်သည့်ပြင်သစ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှလူငယ်တစ် ဦး သည်ရေပေါ်အရုပ်များပြည့်နေသောသားကောင်ရေကန်ဘေးတွင်ထိုင်နေသည်ကိုသတိပေးရန်ရဲကိုဖုန်းဆက်သည်။ ဒါက jovenတစ်ခုတည်းသောသံသယရှိသူပုံရသည် Servaz ၏ကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Marianne ကလေးသာဖြစ်သည် သူထက်ပိုနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်မတွေ့ရသေးပေ။
ကြီးမားပြီးနောက် လေတိုက် ယခင်ခေါင်းစဉ်၏အဆုံး၌ခံစား, Servaz ဖြစ်ခဲ့သည် အလယ်ဗဟိုတွင် interned ရဲများကသည်ကျော်ရဖို့ရုန်းကန်။ သို့သော်တစ်နေ့တွင်သူသည်ဟိုတယ်ခန်းတစ်ခု၏သော့ကိုစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီပယောဂကြောင့်သူ့ကိုရေဒီယိုဂျာနယ်လစ်တစ် ဦး နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ ခရစ္စတင်း Steinmeyerကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်စာကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
နှစ် ဦး စလုံးတွေ့ဆုံလိမ့်မည် y သူတို့၏ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောစိတ်အခြေအနေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် ပို၍ ထူးဆန်းသောအခြေအနေများတွင်သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်လာကြလိမ့်မည်။
El မိန်းမငယ်တစ် ဦး ၏လူသတ်မှု ၏မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်း၌တည်၏ နော်ဝေ အေးဂျင့်ကိုယူ Kirsten nigaardအော်စလိုရဲတပ်ဖွဲ့မှူးသည်မြောက်ပင်လယ်ရှိရေနံတူးစင်အားစစ်ဆေးရန်။ အဲဒီမှာသူကအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်၊ Servaz. Nigaard သည်သူနှင့်အတူပြင်သစ်သို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည် ရှာဖွေဖမ်းယူ ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ပုံရသည် စိတ်ပညာ hirtmannအဆိုးဆုံးနောက်ကွယ်မှ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » စာပေ » စာရေးဆရာများ » Bernard Minier ။ ဗိုလ်မှူးမာတင် Servaz အားဖြင့်သူ့စီးရီး၏ပြန်လည်သုံးသပ်